23 JUJUBE (BEIR) ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ကျန်းမာရေး
Jujube (Beir) ၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၂၃
နေအိမ် ကျန်းမာရေး အာဟာရ Nutrition oi-Shivangi Karn မှ Shivangi Karn အောက်တိုဘာလ 5, 2019 ပေါ်မှာ
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် beir or Plum ဟုလူသိများသော Jujube သည်ချို။ ချိုသောအသီးဖြစ်ပြီးနွေ ဦး ရာသီအတွက်အကျိုးရှိစေသည်။ ၎င်းသည်ရက်စွဲများနှင့်ဆင်တူသည်။ ထို့ကြောင့်အသီးကိုအနီရောင်နေ့၊ တရုတ်ရက်သို့မဟုတ်အိန္ဒိယရက်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ Ziziphus jujuba ဖြစ်သည်  ။
သစ်ရွက်များစိုက်ထူပြီးကျယ်ပြန့်စွာတည်ရှိပြီးလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးသောအမြစ်တွယ်နေသောသစ်ပင်ဖြစ်သည်။ အကိုင်းအခက်များကတိုတောင်း။ ချွန်ထက်သောကျောရိုးများဖြင့်လှပစွာအောက်သို့ကျသည်။ Jujube သစ်သီးသည်ဘဲဥပုံသို့မဟုတ်အဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်ရှိပြီးချောချောမွေ့မွေ့၊ တစ်ခါတစ်ရံကြမ်းတမ်းသောအသားအရေရှိပြီးစိမ်းပြာရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ရှိပြီးအနီနှင့်အညိုရောင်သို့မဟုတ်မီးရှို့သောလိမ္မော်ရောင်သို့ပြောင်းသည်။ သစ်သီးဖျော်ရည်အသားများသည်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီးချိုမြိန်စွာအရည်ရွှမ်းကာနူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။
အိန္ဒိယတွင် jujube မျိုးပေါင်း ၉၀ ခန့်သည်အရွက်ပုံသဏ္,ာန်၊ အသီးအရွယ်အစား၊ အရောင်၊ အရသာ၊ အရည်အသွေးနှင့်ရာသီဥတုကွဲပြားခြားနားသည်။ အချို့သည်အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းတွင်မှည့်သည်။ အချို့သည်ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းနှင့်အချို့သည်မတ်လလယ်အထိtillပြီလအထိဖြစ်သည်။ Jujube သစ်ပင်သည်၎င်း၏အသီးများထုတ်လုပ်မှုအတွက်နေရောင်အပြည့်လိုအပ်သည် [နှစ်ခု] ။
Jujube သည်အရေပြားကိုပြန်လည်နုပျိုစေခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာခြင်းတို့မှအကျိုးများစွာရရှိစေသည်  ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတိုးမြှင့်ဖို့။ jujube ၏အကျိုးကျေးဇူးများသည်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သော်လည်းသစ်သီးများကိုသာကန့်သတ်မထားပါ။ သစ်သီးများ၊ သစ်ရွက်များနှင့်မျိုးစေ့များ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြပါစို့။
jujube ၁၀၀ ဂရမ်တွင်ရေ ၇၇ ဒသမ ၈၆ ဂရမ်နှင့် ၇၉ kcal စွမ်းအင်ရှိသည်။ Jujube တွင်ရှိသောအခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရများသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်  :
0.48 mg ကိုသံ
0,02 မီလီဂရမ်ဗီတာမင် B1
0,04 မီလီဂရမ်ဗီတာမင် B2
0,90 မီလီဂရမ်ဗီတာမင် B3
0,081 မီလီဂရမ်ဗီတာမင် B6
40 IU ဗီတာမင်အေ
Jujube ခုနှစ်တွင် Bioactive ဒြပ်ပေါင်းများ
Flavonoids: Jujube တွင် apavinin ကဲ့သို့သော flavonoids ကင်ဆာရောဂါနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်သည့်လှုပ်ရှားမှုများ၊ puerarin၊ anti- antiinging properties နှင့် isovitexin ပါဝင်သော isovitexin ပါဝင်သည်။  ။
Triterpenoids: အချိုနှင့် tangy အသီးတွင် triterpenoids ursolic acid ပါဝင်ပြီး antitumor နှင့် anti-inflammatory ဂုဏ်သတ္တိများ၊ antiviral, antitumour နှင့် anti- ကင်ဆာနှင့် anti- ကင်ဆာနှင့် pomolic acid တို့ပါဝင်သည်။  ။
Alkaloid: Jujube တွင် sanjoinine ဟုခေါ်သော Alkaloid ပါရှိပြီးစိုးရိမ်စိတ်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်  ။
၁။ ကင်ဆာကိုကာကွယ်နိုင်တယ်။ ခြောက်သွေ့သော jujube အသီးတွင်ဗီတာမင်စီပါ ၀ င်ပြီးကင်ဆာရောဂါကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်အသီး၏ triterpenic acids နှင့် polysaccharides များသည်ကင်ဆာဆဲလ်လိုင်းများကိုသေစေပြီးပြန့်ပွားခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည် [ဆယ့်တစ်] ။
၂ ။ Jujube အသီးတွင်ပါရှိသည့်ပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှုသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေအနည်းဆုံးသောအကောင်းဆုံးသွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။ ထို့အပြင်အသီးတွင်ပါသော antiatherogenic agent သည်အဆီများပြိုကွဲခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးသွေးလွှတ်ကြောများပိတ်ဆို့ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။  ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာထဲတွင် siru thuli peru vellam
၃။ အစာအိမ်ရောဂါများကိုကုသပေးသည်။ jujube အသီးတွင်ပါ ၀ င်သည့်သဘာ ၀ terpenes နှစ်ခုဖြစ်သော Saponins နှင့် triterpenoids သည်အဟာရဓာတ်များကိုစုပ်ယူပြီးကျန်းမာသောအူသိမ်လှုပ်ရှားမှုကိုကူညီသည်။ ၎င်းသည်အစာအိမ်ရောဂါများကိုကြွက်တက်ခြင်း၊ ဖောင်းခြင်းနှင့်အခြားသူများကိုကုသပေးသည်  ။
4. နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုကုသသည်။ jujube အသီးများတွင်ဖိုင်ဘာပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်းသည်အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်အပြင်ပြင်းထန်သောဝမ်းချုပ်ခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးသည်။ သုတေသီများကဤပြproblemနာမှလွတ်မြောက်ရန်လက်တစ်ဆုပ်စာမှည့်သောအခြောက်မှည့်သောရနံ့များနှင့်လုံလောက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်  ။
၅။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းရန်ကူညီသည် Jujube သစ်သီးသည်အမျှင်ဓာတ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးကျွမ်းကျင်သူများပြောသည့်အတိုင်းဖိုင်ဘာသည်ကယ်လိုရီများလွန်းခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့အားကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုပေးသည်။ ပုံမှန်အစားအစာတွင်ထည့်လိုက်လျှင်၎င်းသည်အမျှင်ဓာတ်နှင့်ကယ်လိုရီနိမ့်သောအသီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီနိုင်သည်  ။
၆ ။ သစ်သီးဖျော်ရည်အသီးတွင်ပါသော Polysaccharides သည်အူ၏နံရံကိုအားဖြည့်ပေးပြီးအစာခြေပြiveနာများအားလုံးကိုတိုးတက်စေပါသည်  ။ ထို့အပြင် jujube ရှိဖိုင်ဘာပါဝင်မှုသည်အကျိုးရှိသောအူဘက်တီးရီးယားများအတွက်အစာအဖြစ်စားသည်။ ဆားနှင့်ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ကိုမရောစပ်သည့်အခါသစ်သီးဖျော်ရည်  ။
၇ ။ Jujube သစ်သီးတွင်သံနှင့်ဖော့စဖောရတ်အမြောက်အမြားသည်သွေးနီဥများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏စုစုပေါင်းသွေးလည်ပတ်မှုကိုစီမံရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။  ။
၈ ။ Jujube အသီးတွင် saponins, alkaloids နှင့် triterpenoids ကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များပါဝင်ပြီး၎င်းသည်အဆိပ်အတောက်များကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့်သွေးကိုသန့်ရှင်းစေနိုင်သည်။ ဒီအသီးသည်သွေးလည်ပတ်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည် [ဆယ့်တစ်] ။
၉ ။ jujube အသီးတွင်ရှိသော flavonoids သည်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ထဲသို့ ၀ င်သောရောဂါပိုးများကိုတိုက်ထုတ်သည်။ Jujube အသီးမှထုတ်ယူသော ethanolic သည် betulinic acid သည် HIV နှင့်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်ကူညီပေးသည် [ဆယ့်ငါး] ။
၁၀။ အရေပြားပြproblemsနာများကိုကုသပေးသည် - jujube အသီးသည်ဗီတာမင်စီအလွန်အမင်းကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်သည် [နှစ်ခု] နေ့စဉ်အစားအစာကိုသင်၏အစားအစာထဲသို့ထည့်ခြင်းသည်အရေပြားကိုတက်ကြွစေပြီးဝက်ခြံ၊ နှင်းခူနှင့်အရေပြားယားယံခြင်းများကဲ့သို့သောအခြားအရေပြားပြproblemsနာများကိုလည်းကာကွယ်ပေးသည်။ ဒီအသီးကအရေးအကြောင်းတွေနဲ့အမာရွတ်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးတယ်။
၁၁ ။ Jujube တွင်အခမဲ့အစွန်းရောက်မှုများကိုပျက်ပြယ်စေခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးမှုကိုလျော့ချပေးသည့် polysaccharides များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကိုယ်ခံအားကိုမြှင့်တင်ပေးပြီးရောဂါများမဖြစ်ပွားစေရန်ကာကွယ်ပေးသည်  ။
၁၂ ။ သားဥနှင့်ဆိုင်သောအမျိုးသမီးများအကြားတွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ jujube သစ်သီးထုတ်ယူမှုသည်သန္ဓေတားဆေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ လေ့လာမှုကသက်သေပြမှုသည် jujube သည် ၉၀% ထိထိရောက်ပြီးသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကိုအရေးမကြီးသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်ကုသရာတွင်ထိရောက်ခဲ့သည်  ။
Hyderabad ramoji ရုပ်ရှင်မြို့ရှိသရဲခြောက်တဲ့နေရာများ
၁၃။ နို့ရည်အဆိပ်များကိုဖယ်ရှားသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ထိတွေ့မိသောကြောင့်မိခင်နို့တွင်အာဆင်းနစ်၊ Jujube ကိုစားသုံးခြင်းသည်လူ့နို့ရည်ရှိအဆိပ်အတောက်များကိုလျော့နည်းစေသည်  ။
၁၄။ သွေးပေါင်ချိန်ကိုသက်သာစေသည် jujube သည် atherogenic anti-agent အဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်၎င်းသည်သွေးကြောများအတွင်း၌အဆီများများ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးသွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်သစ်သီးတွင်ပါဝင်သောပိုတက်စီယမ်ပါဝင်မှုသည်သွေးကြောများကိုသက်သာစေသည်  ။
၁၅ ။ Jujube မျိုးစေ့များ၌ flavonoids နှင့် polysaccharides အမြောက်အများပါဝင်ပြီး၎င်းသည်အိပ်မပျော်သည့်လူနာများတွင်အာရုံကြောစနစ်ကိုငြိမ်သက်စေခြင်းဖြင့်အိပ်ခြင်းကိုနှိုးစေသည်။ ၎င်းတို့သည် saponins များရှိနေခြင်းကြောင့်သူတို့၏သက်သာစေသောဆေးနှင့်ညှို့သက်ရောက်မှုများကြောင့်လူသိများသည်  ။
၁၆ ။ Jujube ၏အစေ့များမှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများသည်အဆစ်နှင့်ကြွက်သားများရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာစေသောရောင်ရမ်းခြင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ကြွက်သားနာကျင်မှုကိုကုသပေးသည့်သွေးစီးဆင်းမှုကိုလည်းတိုးတက်စေသည်  ။
၁၇ ။ ကြွက်များနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုတစ်ခုတွင် jujube အမျိုးအနွယ်မှထုတ်ယူသောအရာမှာ anxiolytics ပါ ၀ င်မှုကြောင့်စိတ် ၀ မ်းနည်းမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဤဒြပ်ပေါင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသက်သာစေပြီး cortisol ကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည် [နှစ်ဆယ်] ။
၁၈။ ဦး နှောက်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ jujube အမျိုးအနွယ်မှထုတ်ယူသောအဆုပ်သည် antikovulsant effect ဖြစ်ပြီး၊ ဖမ်းဆီးရမိမှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်သိမြင်မှုအားနည်းခြင်းကိုတိုးတက်စေသည်။ [နှစ်ဆယ့်တစ်] ။
၁၉ ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ jujube မျိုးစေ့ထုတ်ယူမှုက dentate gyrus လို့ခေါ်တဲ့nရိယာထဲမှာ ဦး နှောက်ရဲ့အာရုံကြောဆဲလ်အသစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကူညီပေးတယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်ကူညီသည်  ။
၂၀။ ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းသည်။ Jujuboside A သည် Jujube အမျိုးအနွယ်တွင်တွေ့ရှိရသောတက်ကြွသောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ဦး နှောက်အတွင်းရှိ glutamate ပမာဏကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရောဂါတိုးပွားမှုသည်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါနှင့်ပါကင်ဆန်တို့၏ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအယ်လ်ဇိုင်းမားကိုဖြစ်ပေါ်စေသော amyloid-beta ကိုတိုက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ [၂။ ၃] ။
၂၁ ။ jujube အစေ့များမှထုတ်ယူသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီသည်ဆံပင်ပေါက်ရန်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည်ဆံပင်၏ကြီးထွားမှုကိုတိုးတက်စေပြီးအထူနှင့်တောက်ပစေသည်  ။
၂၂ ။ ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာအရ jujube အရွက်များနှင့်အခြားတက်ကြွသောဒြပ်ပေါင်းများမှထုတ်လုပ်သော jujube အရွက်များထုတ်ယူမှုသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဘဲ haemorrhoids ကိုကုသရာတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေ  ။
၂၃။ အရိုးအင်အားကိုတိုးစေသည်။ အနီရောင်နေ့စွဲတွင်သံ၊ ကယ်လ်စီယမ်နှင့်ဖော့စဖရပ်စ်တို့ကဲ့သို့သောဓာတ်သတ္တုဓာတ်များပါဝင်ပြီးအရိုးများကိုသန်မာစေရုံသာမကအရိုးပွရောဂါကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရိုးရောဂါများမှကျွန်ုပ်တို့ကိုဝေးကွာစေသည်။ [နှစ်ခု] ။
အနီရောင်နေ့စွဲကိုပုံမှန်အားဖြင့်လူသားများကောင်းစွာခံသည်။ သို့သော် jujube ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
Jujube interaction က
Jujube ၏အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
လူတစ် ဦး သည်ဆီးချိုရောဂါဆေးဝါးသုံးစွဲနေပါက jujube ကိုစားသုံးခြင်းသည်သူတို့၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုထပ်မံလျော့ကျစေနိုင်သည်။
လူတစ် ဦး သည်သက်သာစေသောဆေးကိုသောက်ပါက jujube ကိုစားသုံးခြင်းသည်အလွန်အမင်းအိပ်မောကျစေနိုင်သည်။
ကုန်ကြမ်းများထက်သကြားပါ ၀ င်မှုပိုမိုများပြားသောကြောင့်ခြောက်သွေ့သောယွမ်ဘီ၏စားသုံးမှုကိုကန့်သတ်ပါ။
လတ်ဆတ်သောအရသာရှိတဲ့ Jujube အသုတ်စာရွက်
2 ခွက်မှည့်သော jujube (ဆေးကြောပြီးလျှင်
1 ဇွန်းသကြား / ပျားရည် / jaggery
နံနံပင်အရွက်2ဇွန်း
စိမ်းလန်းသောကုန်တယ် (၂) ခု (ရွေးချယ်နိုင်သည်)
၁ ဇွန်းမုန်ညင်းဆီ (optional)
Jujube ကိုလက်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဇွန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းပေါ့။ သူတို့၏အစေ့များကိုဖယ်ရှားပါ။
ကြက်သွန်၊ ငရုတ်သီး၊ မုန်ညင်းဆီ၊ သကြားနှင့်ဆားကိုအသီးထဲသို့ထည့်ပြီးကောင်းစွာရောနှောပါ။
Chen ကဂျေ, လျူ, X တို့, လီ, Z. , Qi, အေ, Yao, P. , Zhou, Z. , ... Tsim, K. (2017) ။ Dietary Ziziphus jujuba သစ်သီးဝလံ (Jujube) - ဦး နှောက်ကာကွယ်မှုအတွက်ကျန်းမာရေးအစားအစာဖြည့်စွက်မှုများကိုတီထွင်ခြင်း။ သက်သေအထောက်အထား -based ဖြည့်စွတ်ခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာဆေးဝါး: eCAM, 2017, 3019568. Doi: 10.1155 / 2017/3019568
[နှစ်ခု]Abdoul-Azize အက်စ် (2016) ။ အာဟာရနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက် Jujube (Zizyphus Lotus L. ) Bioactive Compounds ၏အလားအလာကောင်းကျိုးများ။ အာဟာရနှင့်ဇီဝြဖစ်ဂျာနယ်, 2016, 2867470. Doi: 10.1155 / 2016/2867470
ဖုန်ကြားရှင်, ဒဗလျူအိပ်ချ်, Hsieh, အမ်တီ, Lee က, Y. အက်စ်, လင်း, Y. C. , & Liao, ဂျေ (2000) ။ စိုးရိမ်မှု၏ mouse ကိုမော်ဒယ်များအတွက် Ziziphus jujuba အမျိုးအနွယ်၏ Anxiolytic အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်, 72 (3), 435-441 ။
Naftali, တီ, Feingelernt, အိပ်ချ်, Lesin, Y. , Rauchwarger, အေ, & Konikoff, အက်ဖ်အမ် (2008) ။ နာတာရှည် idiopathic ချုပ်၏ကုသမှုများအတွက် Ziziphus jujuba ထုတ်ယူ: ထိန်းချုပ်ထားလက်တွေ့စမ်းသပ်မှု။ အစာခြေ, 78 (4), 224-228 ။
Huang က, Y. L. , ယန်း, G. အ C. , Sheu, အက်ဖ်, & Chau, C. အက်ဖ် (2008) ။ ရေတွင်ပျော်ဝင်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်တရုတ်ဂျူဘူမှအူလမ်းကြောင်းနှင့်မစင်အညွှန်းကိန်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အစားအစာဓာတုဗေဒဂျာနယ်, 56 (5), 1734-1739 ။
Cao, ဂျေ X တို့, Zhang က, ဆိုးကျိုး Y. , Cui, အက်စ် Y. , Cui, X တို့မှာ Y. , Zhang က, ဂျေ, Zhang က, Y. အိပ်ချ်, ... & Zhao, Y. Y. (2010) ။ Semen Ziziphi Spinosae မှ jujubosides ၏ Hypnotic effect ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်, 130 (1), 163-166 ။
Jujube ကုန်ကြမ်း။ ကြံ့ဖွံ့စားနပ်ရိက္ခာဖွဲ့စည်းမှုဒေတာဘေ့စ။ အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနစိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဝန်ဆောင်မှု။ 23.09.2019 အပေါ်ရယူရန်
Choi, အက်စ်အိပ်ချ်, အန်း, ဂျေခ, Kozukue, N. , Levin, C. အီး, & Friedman, အမ် (2011) ။ ကိုရီးယားတွင်စိုက်ပျိုးသောအပင်များမှရိတ်သိမ်းထားသောအခမဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ၊ flavonoids များ၊ စုစုပေါင်းဖင်နိုလစ်များနှင့် jujube (Ziziphus jujuba) အသီးများနှင့်အစေ့များကို antioxidative လုပ်ဆောင်မှုများဖြန့်ဖြူးခြင်း။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်အစားအစာဓာတုဗေဒဂျာနယ်, 59 (12), 6594-6604 ။
Kawabata, K. , Kitamura, K. , Irie, K. , Naruse, S. , Matsuura, T. , Uemae, T. , ... & Kaido, Y. (2017) ။ Ziziphus jujuba မှခွဲထုတ်ထားသော Triterpenoids များသည်အရိုးကြွက်သားဆဲလ်များတွင်ဂလူးကို့စ်စားသုံးမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အာဟာရသိပ္ပံနှင့်ဗီတာမင်ဂျာနယ်၊ ၆၃ (၃)၊ ၁၉၃-၁၉၉ ။
Taechakulwanijya, N. , Weerapreeyakul, N. , Barusrux, အက်စ်, & Siriamornpun, အက်စ် (2016) ။ Apoptosis-inducing jujube (Zǎo) မျိုးစေ့ထုတ်ယူမှုများ၏သက်ရောက်မှုသည် Jurkat သွေးကင်ဆာ T ဆဲလ်များအပေါ်သက်ရောက်သည်။ တရုတ်ဆေးပညာ, 11, 15 Doi: 10,1186 / s13020-016-0085-x ကို
[ဆယ့်တစ်]Tahergorabi, Z. , Abedini, M. R. , Mitra, M. , Fard, M. H. , & Beydokhti, H. (2015) ။ 'Ziziphus jujuba' - ကင်ဆာရောဂါအတွက်အလားအလာကောင်းသည့်အနီရောင်အသီးတစ်ခု။ Pharmacognosy ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း,9(18), 99-106 ။ Doi: 10.4103 / 0973-7847.162108
Zhao, C. N. , Meng, X. , Li, Y. , Li, အက်စ်, လျူ, ဆိုးကျိုး, တန်, G. အ Y. , & Li, အိပ်ချ်ခ (2017) ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းအတွက်အသီးများ။ အာဟာရ,9(6), 598. Doi: 10,3390 / nu9060598
Jeong, O. , & ကင်မ်, အိပ်ချ်အက်စ် (2019) ။ C57BL /6J ကြွက်များရှိ IRS-1 / PI3K / Akt လမ်းကြောင်းကို activation လုပ်ခြင်းဖြင့် chokeberry နှင့်အခြောက်လှန်းသောသစ်သီးများသည်အဆီနှင့်မြင့်မားသော fructose အစားအစာကိုသွေးဆောင်သည့် dyslipidemia နှင့်အင်ဆူလင်ကိုခုခံနိုင်စွမ်းကိုလျော့ကျစေသည်။ အာဟာရနှင့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှု၊ ၁၆၊ ၃၈ Doi: ၁၀.၁၁၈၆ / s12986-019-0364-5
Guo, X. , Suo, Y. , Zhang, X. , Cui, Y. , Chen၊ အက်စ်, Sun, H. , ... & Wang, L. (2019) ။ အလွန်သေးငယ်သောဇီဝသဟဇာတဖြစ်သော jujube polysaccharide သည်ဂလူးကို့စ်ရှာဖွေမှုအတွက်ပလက်တီနမ် nanoclusters ကိုတည်ငြိမ်စေသည်။ လေ့လာသုံးသပ်သူ။
[ဆယ့်ငါး]Daneshmand, အက်ဖ်, Zare-Zardini, အိပ်ချ်, Tolueinia, ခ, Hasani, Z. , & Ghanbari, တီ (2013) ။ ကလေးအထူးကုကူးစက်ရောဂါဆန့်ကျင်သောလက်နက် Ziziphus Jujuba သစ်သီးမှရေနံစိမ်း။ ကလေးအထူးကု hematology နှင့်ကင်ဆာပညာ၏အီရန်ဂျာနယ်,3(1), 216-221 ။
Zhang က, အယ်လ်, လျူ, P. , လီ, အယ်လ်, Huang က, Y. , Pu, Y. , Hou, X တို့မှာ & သီချင်း, အယ်လ် (2018) ။ Xinjiang Jujube (Ziziphus jujube Mill) မှထုတ်ယူသော Flavonoids ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် Antioxidant Activity ကို Ultra-High Pressure Extraction Technology ဖြင့်ထွက်ခွာသည်။ မော်လီကျူးများ (ဘေဆယ်လ်၊ ဆွစ်ဇာလန်)၊ ၂၄ (၁)၊ ၁၂၂ Doi: 10.3390 / molecules24010122
Farnaz Sohrabvand, Mohammad Kamalinejad, Mamak Shariat, et al ။ 2016. လက်ရှိသုတေသန၏ဂျာနယ်, Vol 'ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန် Shilanum နှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့သားအိမ် cyst အပေါ် high- ထိုး contraceptive ဆေးပြားနှင့်အတူကုသမှု၏သက်ရောက်မှုများနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု' ။ 8, ပြIssueနာ, 09, pp.39365-39368, စက်တင်ဘာလ, 2016
Kelishadi, R. , Hasanghaliaei, N. , Poursafa, P. , Keikha, အမ်, Ghannadi, အေ, Yazdi, M. , & Rahimi, အီး (2016) ။ လူ၏နို့တွင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောဒြပ်စင်များ၏ပြင်းအားအပေါ် Jujube အသီးများ၏သက်ရောက်မှုများအပေါ်ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောစမ်းသပ်မှု။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံသုတေသနဂျာနယ်: Isfahan ဆေးတက္ကသိုလ်သိပ္ပံ၏တရားဝင်ဂျာနယ်, 21, 108. Doi: 10.4103 / 1735-1995.193499
Al-Reza, အက်စ်အမ်, Yoon, ဂျေဗြဲ, ကင်မ်, အိပ်ချ်ဂျေ, ကင်မ်, ဂျေအက်စ်, & ကန်, အက်စ်စီ (2010) ။ Zizyphus jujuba မှမျိုးစေ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏ရောင်ရမ်းခြင်းလှုပ်ရှားမှု။ အစားအစာနှင့်ဓာတုဗေဒ, 48 (2), 639-643 ။
[နှစ်ဆယ်]ဖုန်ကြားရှင်, ဒဗလျူအိပ်ချ်, Hsieh, အမ်တီ, Lee က, Y. အက်စ်, လင်း, Y. C. , & Liao, ဂျေ (2000) ။ စိုးရိမ်မှု၏ mouse ကိုမော်ဒယ်များအတွက် Ziziphus jujuba အမျိုးအနွယ်၏ Anxiolytic အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ethnopharmacology ၏ဂျာနယ်, 72 (3), 435-441 ။
[နှစ်ဆယ့်တစ်]Zhang, အမ်, Ning, G. အ, Shou, C တို့, လူး, Y. , ဟောင်ကောင်,,, & Zheng, X တို့မှာ (2003) ။ hippocampus အတွက်အချိုမှု -mediated excitatory signal ကိုလမ်းကြောင်းအပေါ် jujuboside တစ် ဦး ၏ Inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Planta medica, 69 (08), 692-695 ။
လီ, ခ, ဝမ်, အယ်လ်, လျူ, Y. , Chen က Y. , Zhang က, Z. , & Zhang က, ဂျေ (2013) ။ Jujube သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိသွေးနှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့် acetylcholine အဆင့်များ၌အီစရိုဂျင်ပမာဏတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ကြွက်မော်ဒယ်လ်တွင်သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ စမ်းသပ်နှင့်ကုထုံးဆေးပညာ,5(6), 1755-1759 ။ Doi: 10,38892 / etm.2013.1063
[၂။ ၃]Nasri, အိပ်ချ်, Baradaran, အေ, Shirzad, အိပ်ချ်, & Rafieian-Kopaei, အမ် (2014) ။ ဆေးဝါးများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် nutraceuticals အသစ်သဘောတရားများ။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်,5(12), 1487-1499 ။
Yoon, ဂျေဗြဲ, Al-Reza, အက်စ်အမ်, & Kang, အက်စ်စီ (2010) ။ ဆံပင်ကြီးထွားမှုသည် Zizyphus jujuba မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အစားအစာနှင့်ဓာတုဗေဒ, 48 (5), 1350-1354 ။
Chirali, ဗြဲ Z. (2014) ။ ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာဖလားကုထုံး - အီး - စာအုပ်။ Elsevier ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ။
လျူ, အယ်လ်, လျူ, စီ, ဝမ်, Y. , ဝမ်, P. , လီ, Y. , & Li, ခ (2015) ။ စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အိပ်မပျော်မှုအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးပညာ။ လက်ရှိ neuropharmacology, 13 (4), 481-493 ။ Doi: 10.2174 / 1570159X1304150831122734
Lee, အမ်အက်ဖ်, Chen, Y. အိပ်ချ်, Lan, ဂျေအယ်လ်, Tseng, C. Y. , & ဝူ, C. အိပ်ချ် (2004) ။ အိန္ဒိယ၏ jujube (Zizyphus mauritiana) ၏မတည့်သောအစိတ်အပိုင်းများသည် IgE Cross-reactivity ကို latex allergen နှင့်ပြသည်။ ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့်ရောဂါကုသရေး၏နိုင်ငံတကာမော်ကွန်းတိုက်, 133 (3), 211-216 ။